Sunday February 02, 2020 - 11:46:09 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dowladda Shiinaha ayaa iclaamisay in boqolaal qof oo hor leh ay udhinteen cudurka dilaaga ah ee CoronaVirus kaasi oo saameyn ba'an ku yeeshay wadamo badan oo katirsan qaaradda Aasiya.
Wasaaradda caafimaadka Shiinaha ayaa xaqiijisay in dadka udhintay cudurka CoronaVirus ay gaarayaan 304 qof islamarkaana ay lajiifaan dad ka badan 10-kun oo qof arrinkaas oo sare usii qaadaya cabsida laga qabo in cudurkan ku faafo caalamka intiisa kale.
Isbitaallada waaweyn ee wadanka Shiinaha ayaa ku jira xaalad heegan ah waxaana jirta cabsi ah in cudurku laayo dadka ku dhaqan tuulooyinka iyo miyiga, qof udhashay dalka Filibiin ayaa noqday qofkii ugu horreeyay ee cudurkan dibadda ugu dhintay kadib markii uu ka tagay shiinaha isagoo qaba Viriska Corona.
Inta badan wadamada caalamka ayaa muwaadiniintooda ka mamnuucay in ay usafraan Shiinaha sidoo kale waxay joojiyeen duulimaadyadii sida tooska ah u tagi jiray dalka Shiinaha.
Cudurkaan dilaaga ah waxaa sababay hilibka xayawaanno xaaraan ah oo gaalada shiinaha ay cuneen sida Daanyeerka,Fiidmeerta iyo eeyaha, dadka cawaanta shiinaha ayaa cuna dhammaan xayawaanaatka si aan kala sooc laheyn taas oo keentay in Alle ku sallido cuduro laayaan ah oo aan caalamka horay loogu arkin.
Nin walaalkiis si xun ugu dilay degmada Dayniile.